Fanjakana Iray Eran-tany | Ianaro ny Tenin’Andriamanitra
1. Nahoana no fanjakana iray ihany no tokony hitondra ny tany manontolo?
Efa maneran-tany ankehitriny no misy olana. Mahantra sy mijaly ny ankamaroan’ny olona any amin’ny tany sasany. Manana mihoatra noho izay tena ilainy kosa ny olona maro any an-tany hafa. Tsy ho voazara mitovitovy mihitsy ny harena eto an-tany raha tsy fanjakana iray ihany no mitondra ny tany manontolo.—Vakio ny Mpitoriteny 4:1; 8:9.
2. Iza no afaka hitondra ny tany manontolo?
Tsy hisy hanaiky mihitsy ny hoe mpitondra iray ihany no hitondra ny tany manontolo, satria tsy misy olona hahavita tsara an’izany. Tsy misy olona heken’ny olon-drehetra ho mpitondra izany koa. Miharatsy toetra koa ny olona rehefa mahazo fahefana. Mampatahotra na ny mieritreritra fotsiny aza hoe olona iray no hanjakazaka amin’ny olona rehetra.—Vakio ny Ohabolana 29:2; Jeremia 10:23.
Nifidy an’i Jesosy Zanany i Jehovah Andriamanitra mba hitondra ny olombelona mandrakizay. (Lioka 1:32, 33) Efa niaina tetỳ an-tany i Jesosy. Nanasitrana ny marary izy tamin’izany, nampianatra ny olona ambany, ary niaraka tamin’ny ankizikely. (Marka 1:40-42; 6:34; 10:13-16) I Jesosy àry no Mpitondra tsara indrindra.—Vakio ny Jaona 1:14.
3. Mety ve raha mpitondra iray ihany no hitondra ny tany manontolo?
Notendren’Andriamanitra hitondra ny tany avy any an-danitra ny Zanany. (Daniela 7:13, 14) Tsy voatery hankany amin’ny faritra rehetra hanjakany ny mpitondra olombelona rehefa manjaka. Toy izany koa fa tsy voatery hanketỳ an-tany i Jesosy vao ho afaka hitondra ny olombelona.—Vakio ny Matio 8:5-9, 13.
Tsy ny olon-drehetra anefa no hanaiky an’i Jesosy ho Mpitondra, fa izay tia ny tsara ihany. Horinganin’i Jehovah izay tsy manaiky an’io Mpitondra be fitiavana sy tia rariny io.—Vakio ny Matio 25:31-33, 46.
4. Inona no hataon’ilay ho Mpitondra ny tany manontolo?
Toy ny mpiandry ondry manangona ny ondriny i Jesosy. Efa manangona ny mpandefitra avy any amin’ny firenena rehetra izy, ary mampianatra azy ireo ny lalàn’Andriamanitra momba ny fitiavana. (Jaona 10:16; 13:34) Lasa mpanohana mafana fo an’i Jesosy sy ny fitondrany izy ireo. (Salamo 72:8; Matio 4:19, 20) Mampahafantatra ny olona eran-tany izy ireo fa efa lasa Mpanjaka i Jesosy.—Vakio ny Matio 24:14.
Kely sisa i Jesosy dia hanafaka ny olombelona amin’ny mpitondra ratsy fanahy. Nifidy ny sasany tamin’ny mpanara-dia azy izy mba hiara-manjaka aminy avy any an-danitra. (Daniela 2:44; 7:27) Hahalala an’i Jehovah ny olona rehetra rehefa hitondra i Jesosy, ary ho lasa paradisa toy ny tamin’ny voalohany ny tany.—Vakio ny Isaia 11:3, 9; Matio 19:28.